Madaxweyne Xaaf oo ka tanaasulay doorashada madaxtinimada Galmudug - Jigjigaonline
HomeSomalidaMadaxweyne Xaaf oo ka tanaasulay doorashada madaxtinimada Galmudug
Muqdisho (Jigjigaonline) – Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay u tartamida doorashadda madaxtinimada maamulka Galmudug,islamarkaana uusan ka mid noqon doonin musharaxiinta.
Xaaf ayaa sheegay mudaddii uu xilka hayey sida uu hadalka u dhigay lugaha lagu dhigay, laakiin haddii uu heli lahaa madaxbannaani uu ku shaqeeyo Galmudug uu gaarsiin lahaa meel wanaagsan.
Maalmihii ugu danbeey waxaa soo baxayay warar sheegaya in Xaaf uu ka mid noqonayo musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Galmudug doorashada dhawaan la filayo in ay dhacdo.
Khilaaf muddo dheer soo taagnaa kaddib Xaaf ayaa heshiis la galay dowladda Soomaaliya wixii xiligaa ka danbeeyeyna waxaa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Gabdhaha 10 jirka Kenya oo la siiyo dawada dhalma-joojinta